Izindatshana zikaLaura Himmer zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge ULaura Himmer
"Ama-Ecommerce Brands abhekene ne-80% Rate Rate" I-E-commerce esebenzayo Naphezu kwalezi zibalo ezicindezelayo, uLevi Feigenson wakhiqiza ngempumelelo imali engamaRandi ayizigidi ezingama-27,800 ngenyanga yokuqala yebhizinisi lakhe le-e-commerce. UFeigenson, nonkosikazi wakhe, wethule umkhiqizo wezesekeli obizwa ngokuthi yiMushie ngoJulayi ka-2018. Kusukela lapho, akusekho ukubuyela emuva kubanikazi nakulo mkhiqizo. Namuhla, uMushie uletha cishe u- $ 450,000 ekuthengiseni. Kule minyaka yokuncintisana ye-e-commerce, lapho ukuthengisa okungu-50%
Imboni ye-e-commerce kulindeleke ukuthi ikhule ngokuqhubekayo eminyakeni ezayo. Ngenxa yentuthuko kwezobuchwepheshe nokwehluka kwezintandokazi zokuthenga zabathengi, kuzoba nzima ukubamba izinqaba. Abathengisi abahlonyiswe kahle ngamathrendi nobuchwepheshe bamuva bazophumelela kakhulu uma kuqhathaniswa nabanye abathengisi. Njengombiko ovela kwaStatista, imali engenayo yokuthengisa e-commerce yomhlaba izofinyelela ku- $ 4.88 trillion ngo-2021. Ngakho-ke, ungacabanga ukuthi imakethe ishesha kangakanani